प्याब्सनको अध्यक्षमा पुरी निर्वाचित | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २९ फाल्गुन २०७५, बुधबार २०:३७ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौँ । निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन) को १४औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट टीकाराम पुरी सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
आज सम्पन्न महाधिवेशनले पुरीलाई अध्यक्षमा चयन गरेको निर्वाचन कार्यदलका सदस्य भोजबहादुर शाहले जानकारी दिए । नयाँ नेतृत्वका लागि पुरी र डिके ढुङ्गानाको समूहले मनोनयन दर्ता गरे पनि पूर्वअध्यक्षहरुको पहलमा सहमति भएको हो ।
बन्दसत्रमा प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष शाहले प्याब्सनमा सबैलाई समेट्नका लागि सहमति गरिएको बताए । विधान संशोधन गरी सहअध्यक्ष पद नयाँ सिर्जना गरी प्याब्सनमा सहमति गरिएको थियो । सहमति हुनुभन्दा अगाडि विधान संशोधन गरिएको थियो । अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी ढुङ्गानालाई सहअध्यक्ष बनाइएको छ ।
प्याब्सनको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजेन्द्र बानियाँ, खुला उपाध्यक्षमा ईश्वरबहादुर गुरुङ, टिआर ढकाल, दीपिका रिमाल थापा, कृष्णप्रसाद अधिकारी, टङ्क भट्टराई, गोपालप्रसाद आचार्य र भरतबाबु कँडेल निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी महासचिवमा कुमार घिमिरे, उपमहासचिवमा आरबी कटुवाल र किशोर गौतम, कोषाध्यक्षमा सन्तोषमणि न्यौपाने निर्वाचित भएका छन् ।
यस्तै सचिवमा मधु लोहनी, भीमसेन केसी, भुवनलाल श्रेष्ठ, सङ्गीता सिलवाल, मदनकुमार आचार्य, राजेशकुमार दास र शिव कार्की, सहकोषाध्यक्षमा मिनप्रसाद बञ्जाडे, ग्रेस श्रेष्ठ, आशा खड्का र गणेशबाबु पोखरेले रहेका छन् ।
प्याब्सनको सल्लाहकारमा आशिष श्रेष्ठ र प्राज्ञिक सल्लाहकारमा राजकुमार महर्जन चयन भएका छन् । यस्तै प्रदेश उपाध्यक्षमा प्रदेश नं १ मा नारायणप्रसाद घिमिरे, प्रदेश नं २ मा गोपाल कार्की, प्रदेश नं ५ मा विष्णु पन्थी, कर्णाली प्रदेशमा बलदेव कँडेल, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जगवीर थापा निर्वाचित भएका छन् ।
पूर्वअध्यक्ष शाहले प्रदेश नं ३ र ४ तथा केन्द्रीय सदस्यको कार्यदलबाट सर्वसम्मत गर्ने जानकारी गराए। कार्यदलका अर्का सदस्य राजेश खड्काले प्याब्सनलाई सहमति सहकार्यका रुपमा लैजान सर्वसम्मत गरिएको जानकारी गराए। कूल दुई हजार ४३८ प्रतिनिधि सहभागी महाधिवेशनको मङ्गलबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले उद्घाटन गरेका थिए । प्याब्सनमा २५ पदाधिकारी र ४४ केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था छ । ती पदका लागि कूल १०३ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।
आतंकवादी संगठनको रकम आईएनजीओमा !
काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले नेपालमा केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आईएनजीओले अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया एजेन्सी आईएसआईएस संगठन मार्फत…
जापान जान कुनैपनि प्रकारको कारोबार नगर्न आग्रह
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जापानको रोजगारीको लागि भन्दै कसैसँग कुनै प्रकारको कारोबार नगर्न आग्रह गरेको छ ।…
बस र ट्रक ठोक्किँदा १९ घाइते
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको दासढुङ्गामा गएराति बस र ट्रक ठोक्किँदा बसमा सवार १९ यात्रु घाइते भएका छन् ।
१०८ बर्षीय बृद्धले समेत पाएनन् वृद्धभत्ता …
काठमाडौँ । ललितपुरको गोदवारी नगरपालिका ७ देवीचौर बस्ने १०८ बर्षीया विश्वनाथ तिमल्सिनाले मंसिरदेखि बृद्धभत्ता नपाएको गुनासो गरे ।…
नागढुंगाबाट ६ किलो सुन बरामद
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले काठमाडौंको नागढुंगाबाट ६ किलो सुन बरामद गरेको छ । केरुङबाट काठमाडौं आउँदै गरेको मोटरसाइकल जाँच…
कतारले विदेशी नागरिकलाई पीआर दिने, यस्तो छ प्रावधान
काठमाठौँ । कतारले आप्रवासीलाई स्थायी आवास दिन शुरु गर्दैछ । उसले आफ्नो देशमा लामो समयदेखि बसिरहेका विदेशीहरुलाई यस्तो सुविधा…
सेक्स गर्दा किन आवाज निकाल्छन् महिला ? 293 views